Ukuntuleka kogwadule eningizimu-mpumalanga yeSpain kungakhula kakhulu eminyakeni ezayo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukugwaduleka eningizimu-mpumalanga yeSpain kungakhula kakhulu eminyakeni ezayo
Isifunda iMedithera singenye yezindawo ezisengozini enkulu yokuba ihlane. Isomiso esinamandla futhi esihlala isikhathi eside, izimvula ezinamandla eziqeda kancane ungqimba lwenhlabathi, ziveze idwala, ngaphandle kokukhohlwa ukuxhashazwa kwezolimo nemfuyo, zidala ukuthi imiphumela yokufudumala komhlaba izwakale kakhulu kulokhu ingxenye yomhlaba.
Inkinga ingaba yimbi nakakhulu eminyakeni ezayo, futhi ingathinta ikakhulukazi isifunda saseMar Menor.
1 Kuyini ukugwaduleka?
2 Ingabe kukhona okungenziwa ukukuvimbela?
Ugwadule kuyindlela yokwehla komhlabathi okuqhubekayo ngenxa yokwehluka kwesimo sezulu nomsebenzi wabantu. Le yinkinga esakazekayo njengoba amazinga okushisa omhlaba ekhuphuka, okwenza isimo sibe sibi kakhulu kubantu abathi, ngandlela thile, basizakala ngalo mhlaba.
Kodwa-ke, inani labantu liyakhula, kanye nesidingo sezindlu, ukudla, njll., Ukuze ukugawulwa kwamahlathi, ukungcoliswa kwamakhemikhali, ukugxila kwemisebenzi yezomnotho ezindaweni ezisogwini, imisebenzi yezimboni, ezokuvakasha, kanye nakho konke lokhu esixoxe ngakho ekuqaleni kwendatshana kufaka ingcindezi enkulu emithonjeni yemvelo.
Ingabe kukhona okungenziwa ukukuvimbela?
Akungabazeki. Ngamazwi kaJosé Antonio Sánchez, isithunywa seKholeji Esemthethweni Yezazi Zomhlaba eMurcia ku I-Europa Press, enye yezinto ebingenziwa "ukuxhumanisa ukuphathwa kwezinsizakusebenza zomhlaba nezamanzi ukuvikela inhlabathi ekugugulekeni, usawoti kanye nezinye izinhlobo zokucekelwa phansi, kanye nokuvikela isembozo sezimila."
Ngaphezu kwalokho, ihlongoza ukuqapha nokulawula izinqubo zokuxhashazwa kwama-aquifers, ikhwalithi yamanzi angaphansi komhlaba, ngaphandle kokutshalwa kabusha kwamahlathi ukugwema ukuguguleka kwenhlabathi.
Ngalezi zinyathelo, ukwenziwa ihlane kungamiswa, hhayi eSpain kuphela, kodwa nasemhlabeni wonke.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izibikezelo » Ukugwaduleka eningizimu-mpumalanga yeSpain kungakhula kakhulu eminyakeni ezayo
Kuyiqiniso yini ukuthi phezulu phezulu kunomoya-mpilo omncane?